Avereno jerena ny Capture G5 HD, finday avo lenta voalohany an'ny Gigatel | Androidsis
Alejandro Alemanina | | hevitra
Mihamaro hatrany ireo orinasa Espaniola entanina hanamboatra fitaovana finday, tsy isalasalana fa ny malaza indrindra, ilay manana ny lazany indrindra dia ny bq, fa misy maro hafa izay manomboka na efa manana dia eto amin'ity izao tontolo izao ity izy ireo.
Androany izahay manome anao ny famerenana ny fitaovana finday voalohany an'ny Spanish TvTech, orinasa iray manana renivohitra Espaniola 100% miditra amin'ny tontolon'ny telefaona finday eo ambanin'ny marika Gigatel, miaraka amin'ny terminal izay izahay dia manolotra ny Capture G5 HD.
Manana terminal eo alohanay isika afaka miditra ao anatin'ny elanelam-potoana isikaRaha jerena ny fepetra arosony dia mitovy amin'ny ambin'ireo fitaovana izay mamakivaky ny laharana iray ihany izy ireo, hiresaka momba azy ireo eto ambany isika.
Ny fonao a quad core processeur Miaraka amin'ny hafainganan'ny famantaranandro 1.3 GHz, miaraka amina 1 GB RAM, eo amin'ny sehatry ny fitehirizana, manana 8 GB fahaiza-manao izy fa miaraka amin'ny mety hanitarana azy amin'ny alàlan'ny karatra microSD hatramin'ny 32 GB.
Izy io dia manana efijery IPS HD 5-inch, miaraka amina fanapahan-kevitra 1280 × 720 teboka, tamin'ny fotoana nanandramako azy dia namela tsiro mahafinaritra ahy, ny kalitaon'ny loko dia tsara, izay misy ny rafitra fiasa misy antsika dia Android kinova 4.4.2 KitKat.
Mikasika ireo fakantsary entiny, manana isika Fakan-tsary voalohany 2MP ary fakan-tsary 13MP aoriana, ny kalitaon'ny sary dia tena tsara ho an'ny elanelam-potoana, saingy tsy maintsy ho mazava fa tsy afaka mody manana kalitaon'ny sary avo be isika raha miroso amin'ity sehatry ny fitaovana ity.
Mikasika ny bateria dia manana bateria 2000 mAh izy, izay nanome ahy fahatsapana tsara, ny fomba fatoriany dia tena mety indrindraAraka ny nolazaiko tao amin'ilay horonan-tsary, avelao ny bateria finday misy bateria 70-65% ary rehefa afaka 11 andro dia nisy 43%, zavatra tena tsara, avy eo manana ny fampiharana azy manokana manampy anao hanatsara ny batterinao ny finday, milaza aminao ireo rindranasa mandany izy ireo ary ohatrinona ny tahiry midika hoe manala azy ireo.
Raha omenao ny fampiasana azy ara-dalàna, izany hoe tsy milalao tontolo andro ianao, na mampiasa rindranasa izay mihinana be loatra, fa mampiasa azy io hamaliana WhatsApp, mamaky mailaka ary mizaha, ny telefaona dia mahazaka ny andro tsy misy olana, Nahavita niaritra roa andro lava aho tamin'ny fampiasako azy io ho an'ny tena voafehy, mieritreritra aho fa noho ny fanatsarana ny fanjakana tsy miasa.
Raha miresaka momba ny famolavolana sy ny haben'ny fitaovana isika, ny fonony aoriana izay tonga fenitra dia manga iray izay tsara jerena mivantana, miaraka amina fikasihana mahafinaritra, ny lanjan'ny fitaovana dia 140 grama sy ny hateviny 8.5 milimetatra, miverina amin'ilay voalaza etsy ambony isika, amin'ny fiheverana ny elanelam-potoana ary ny vidiny izay iasantsika amin'ity sehatra ity dia manana famaranana tsara.
Mba hamaranana ity famakafakana ny Capture G5 HD ity, afaka miresaka momba ny fifandraisana isika, telefaona Dual Sim, miaraka amin'ny fahafaha-manao 3G, WiFi 802.11 ary Bluetooth, ilay ny vidiny azonao vidiana amin'ny finday dia 169.90 euro izay vidiny somary voahitsy ary ihetsehan'ny mpifaninana sisa.
Tsy mora ny miditra amin'ny tontolon'ny telefaona, indrindra ny fandinihana izany ity fitaovana ity dia tsy maintsy mifaninana amin'ny Moto G an'i Motorola, telefaona iray izay amin'ny lafiny mety, kalitao, fanavaozana ary vidiny, raha ny fahitako azy no tsara indrindra eny an-tsena, araka ny hitanao tamin'ny horonan-tsary ny valin'ny AnTuTu an'ny Capture G5 HD dia 18373, vokatra somary avo kokoa noho ny Moto G, saingy tsy fahasamihafana lehibe izany.
Famaranana, ho an'ny andavan'andro ny telefaona dia mihoatra ny ampy, teboka iray manohana dia ny fanamafisana ny fahatongavan'ny Android 5 Lollipop mankany amin'ny terminal, ny bateria dia manana fiaretana tsara ary miaritra tsara amin'ny fampiasana isan'andro, rehefa mandeha ny fotoana dia ho hitantsika ny ataon'i Gigatel amin'ity traikefa vaovao ity, eto dia irinay mirary soa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Avereno jerena ny Capture G5 HD, finday avo lenta voalohany an'ny Gigatel